Pre varotra service
Ny mpampiasa na ny hafa departemanta ny marina, ny tsipiriany fampidirana ny orinasa ny vokatra, ary manome mifandray ara-teknika antontan-kevitra no tena tonga lafatra, mba hanampy ny famolavolana rafitra hanatanteraka ara-teknika fifanakalozana, mba hihaino ny mpampiasa sy ny fanolorana ny manan-danja sampan-draharaha, amin'ny ny famolavolana sy ny fanamboarana vokatra araka ny tena toe-javatra, hanatsarana ny vokatra, mba hitsena ny antonony fepetra ny dingana users.Provide antonony fanomezana ny mpampiasa araka ny toe-entona.
Ao amin'ny fivarotana ny asa
Tsy araka ny lalàna manan-danja, fitsipika sy ny fitsipika ny fanjakana sy ny zo sy ny andraikitry ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana hentitra manaraka ny fepetra ny contractperformance.- taorian'ny daty mahomby ny fifanekena ny mpampiasa sy Design Institute mba provideequipment sary ary ny fanazavana amin'ny antsipiriany.
Ny orinasa fitaovana tsapaka amin'ny vokatra taratasy, nampirina entana lisitra, fanamarinana ny fisafoana, taratasy tsindry sambo sy ny toromarika ho an'ny fampiasana.
Ny orinasa foiben'ny aorian'ny fivarotana Sampan-draharahan'ny Fanompoana, ary ny fananganana ofresident anjara fanompoana ao amin'ny firenena maro faritra, isaky ny birao no fitaovana amin'ny matihanina ara-teknika mpiasa mba hanome ny PSA teknolojia sy ny tena mandroso ara-teknika planfor ny mpampiasa, dia vao mainka ara-potoana mba hanome mpampiasa amin'ny kalitao rehefa fivarotana service. Rehefa avy saleservice foiben'ny orinasa finday: 13868185226/13588050818
Ny fametrahana fitaovana sy naniraka vanim-potoana, ny orinasa araka ny fifanarahana ka nanaiky hanome tolotra mifandraika.
Nahazo ny telex na ny mpampiasa telefaonina, ny orinasa mpanjifa servicedepartment dia hamaly avy hatrany, raha ilaina rehefa service fivarotana manokana dia afaka tonga ny mpampiasa ny fitaovana fanamboarana-toerana.
Firaketana an-tsoratra isika hametraka mpampiasa, fitaovana manampy ny mpampiasa fitantanana; mampahatsiahy ireo mpampiasa tsy tapaka mba hisolo manao faritra, ka jereo ny fitaovana sy ny zavatra tokony homarinana avy saina, natsangana asa fanompoana mpanjifa rakitra manambara, fa ny fikojakojana ny mpampiasa tari-dalana fitaovana maimaim-poana.
Ny fitarainana tariby: raha eo amin'ny dingan'ny fifandraisana amin'ny orinasa officeshave misy tsy afa-po, dia azo zaraina ho barotra fitantanana foibe polyempty ao amin'ny didy miantso miasa ora ao amin'ny fitarainana Tel: 13868185226/13588050818